Amụma Nzuzo | Okwu & Ọnọdụ | Ụzọ Ịkwụ Ụgwọ | Nweghachi nkwụghachi
Ozi anakọtara site na www.itstechschool.com ma ọ bụ www.itstraining.in na-echekwa ya ma ọ bụghị agafe n'òtù ndị ọzọ maka ahịa ma ọ bụ ọrụ nkwado.
Ọ bụrụ na ị na-etinye ma ọ bụ jụọ maka ọrụ anyị ma ọ bụ ozi ihe omume site na anyị na nke na-achọ ozi ma ọ bụrụ na ịkekọrịta adreesị ozi-e gị n'ọnọdụ ahụ ị nwere ike ịnweta ozi ịntanetị mgbe ụfọdụ site n'aka anyị gbasara ọrụ anyị na-enye. Ọ bụrụ na ịchọghị ịnweta ozi-e ndị dị otú ahụ biko gwa anyị na info@itstechschool.com ma ị gaghị enweta ozi ịntanetị n'ọdịnihu n'aka anyị.
Nchọpụta Ntanetị ọhụrụ emeela ka ndị na-anọchite anya ndị nnọchiteanya nweta ozi na ịchọta ihe. Mgbe ị jụọ ya na ITS, a ga-edeghachi azịza anyị na ndị nnọchiteanya nke mpaghara gị ma ị nwere ike ịnweta ozi ịntanetị site n'aka ha inye onyinye iji nyekwuo ozi.
N'ihi ahịa ahịa na ozi nkwado nke ọtụtụ mail engine eji spam nzacha, ọ ga-ekwe omume ka email anyị ghara ịbịaru gị mgbe niile. Iji hụ na anyị ekwesịghị ịjụ ajụjụ anyị, anyị na-eziga email na-esochi (iji adreesị ozi-e ọzọ admin@itsgroup.in in case we do not receive a read report or a reply to our email.
Nchọpụta Ntanetị ọhụrụ na-eji kuki, pikselụ pikselụ na teknụzụ ndị yiri ya. Anyị na-eji kuki kpụkọrọ anyị ma ọ bụ ndị ọzọ maka anyị maka ọtụtụ ebumnuche gụnyere iji rụọ ọrụ ma hazie weebụsaịtị. Ọzọkwa, enwere ike iji kuki iji soro otú ị si eji saịtị ahụ iji kwụsị mgbasa ozi gị na weebụsaịtị ndị ọzọ.
Ịkwụ ụgwọ Policy
Enwere ike ịchekwa data kaadị / ụgwọ debit niile na ozi nkeonwe onwe onye, ​​rere, keta, ịgbazinye ma ọ bụ nyefee n'aka ndị ọzọ.
Enwere ike ịgbanwe ma ọ bụ emelite oge ụfọdụ iji mee ihe ndị chọrọ na ụkpụrụ. N'ihi ya, a na-agba ndị ahịa 'ume ka ha na-agakarị ngalaba ndị a ka ha wee nwee ike imelite banyere mgbanwe na weebụsaịtị. Mgbanwe ga-adị irè n'ụbọchị a ga-eziga ha.
Ụfọdụ n'ime mgbasa ozi ị na-ahụ na saịtị na-ahọrọ ma nyefee site n'aka ndị ọzọ, dịka netwọk mgbasa ozi, ụlọ ọrụ mgbasa ozi, ndị mgbasa ozi, na ndị na-enye ndị na-ege ntị. Ndị a nke atọ nwere ike ịnakọta ozi gbasara gị na ọrụ ịntanetị, ma na saịtị ma ọ bụ na weebụsaịtị ndị ọzọ, site na kuki, mgbama weebụ, na teknụzụ ndị ọzọ iji gbalịa ghọta ihe ndị ị chọrọ ma nyefee gị mgbasa ozi ndị ahaziri maka ọdịmma gị. Biko cheta na anyị enweghị ike ịnweta, ma ọ bụ na-achịkwa, ozi ndị a ndị ọzọ nwere ike ịnakọta. Omume ozi nke ndị ọzọ a anaghị ekpuchi iwu nzuzo a.
Ajuju ma ọ bụ nkwupụta ọ bụla nke sitere na ma ọ bụ na njikọ na weebụsaịtị a ga-achịkwa ma kọwaa dịka iwu nke INDIA
India bu obodo anyi.
Ọ bụrụ na ị na-akwụ ụgwọ maka ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ anyị na ebe nrụọrụ weebụ anyị, a ga-enye nkọwa zuru ezu nke ị rịọrọ ka ị nyefee ozugbo na onye na-akwụ ụgwọ anyị site na njikọ ejiri.
Onye na-akwado ya ga-ejigide ihe ndekọ ndekọ ego na atụmatụ ahịa na ahịa.
Anyị na-anakwere ịkwụ ụgwọ site na iji Visa na MasterCard credit / debit card na USD, GBP, EUR, AED & INR ego.
Ozugbo a kwụrụ ụgwọ ụgwọ akwụkwọ, a gaghị akwụghachi ụgwọ.
A gaghị akwụghachi ụgwọ ụgwọ nkuzi.
Nkwụghachi ụgwọ ga-eme naanị site na Ụzọ mbụ nke ịkwụ ụgwọ.
Enwere ike ịkwụghachi ụgwọ nkuzi ma ọ bụrụ na anyị ga-azaghachi na mbụ 4 awa ọzụzụ.